माघे संक्रान्ति : किन र कसरी मनाईन्छ ? तिलको लड्डु र खिचडी खानुको वैज्ञानिक रहस्य !
माघे संक्रान्ति : किन र कसरी मनाईन्छ ? तिलको लड्डु र खिचडी खानुको रहस्य !
२७ पुष २०७५, शुक्रबार १३:४१
यो पर्व माघ महिनाको पहिलो दिन मै मनाइन्छ । यस पर्वको अनेक नाम छन् । जस्तो माघे संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघी । हाम्रा पूर्खाहरुले यो पर्व मनाउने चलन त्यसै सुरु गरेका होइनन् । माघे संक्रान्ति मनाउनुको खास अर्थ छ, सामाजिक, आर्थिक सबै दृष्टिले । यो पर्व स्वास्थ्य र समाजसँग पनि एकाकार छ ।
तिलको लड्डु र खिचडी खानुको वैज्ञानिक रहस्य
माघे संक्रान्तिका दिन घरघरमा खिचडीका साथमा तिल तथा गुडबाट बनेका परिकार सेवन गरिन्छ । यी खानपानसँग माघे संक्रान्तिको के सम्बन्ध छ ? किन तिलको लड्डु खाइन्छ ? किन खिचडी खाइन्छ ?
माघे संक्रान्तिमा तिलको महत्वको पौराणिक आधार रु
किन माघे संक्रान्तिमा बनाइन्छ खिचडी ?
नयाँ वर्षको स्वागत
सगरमाथाको उचाइ बढ्यो, नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४८.८६ मिटर
काठमाडौं – विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ आज सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल र
असफल्तासँग हार नखाएकी नम्रताको ‘मिस वर्ल्ड’ जित्ने सपना
काठमाडौं — ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२०’को उपाधी नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छिन् । यो बर्षको ‘मिस